Muxuu yahay qorsha-hawleedka hayada Duulista iyo Madaarada Jamhuuriyada Somaliland?? • Oodweynenews.com Oodweyne News
Inta aan ka xasuusto, Wasaaradii Duulista Hawada iyo Gaadiidka Cirka ee Jamhuuriyada Somaliland waxa soo maray 7 Wasiir oo kala wakhti dheeraa, kala Xisbi duwanaa, isla markaana kala khibrad badnaa balse ka mideysnaa horumarinta aviationka Somaliland.
Markii talada dalka loo doortay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxa uu meesha ka saaray Wasaaradii Duulista isaga oo ka dhigay hay`ad madax banaan oo loo bixiyey “Hayada Duulista iyo Madaarada”. Abuuritaanka hay`ad madaxbanaan oo u gaar ah aviationka oo dalku yeeshaa waxay ahayd talaabo sax ah oo waafaqsan sida ay dalalka aduunyadu u dhistaan hay`adahooda qaabilsan duulimaadyada madaniga ah sida hay`ada Civil Aviation Authority (CAA) ee ka dhisan dalka Ingiriiska (United Kingdom), Federal Adminstration Authority (FAA) oo ka dhisan dalka Maraykanka (United States of America), Ethiopian Civil Aviation Authority (ECAA) oo ka jirta dalka Itoobiya (Ethiopia) iyo Kenya Civil Aviation Authority (KCAA) oo ka dhisan dalka Kiiniya (Kenya).
Dadaalka ay dawlada Federalka Somaliya ugu jirto la soo wareegida Maamulka Hawadu waa mid aan kala joogsi lahayn tan iyo 2010kii. Aniga oo ogsoon in Wasaarada arimaha dibeda ee Somaliland ay hawshaa iyadu ku jirto, hadana cida sida ay sida tooska ah u khuseysaa waa hayada duulista iyo Madaarada ee maxaa uga meel yaala arinkaa? Ma jiraa qorshe cilmiyeysan oo hordeg ah (proactive) oo hayadu ugu talogashay inay ku wajahdo Somaliya? Maxaa hayada u diyaarsan tab iyo xeelad haddiiba ay dhacdo (worst case scenario) in Somaliya si rasmi ah loogu wareejiyo maamulka hawada? Ma haboon tahay inay Hayadu ka gudubto siyaasada ku dhisan falcelinta (reaction) taas oo caado noqotay mar kasta oo dhinaca Somaliya arrin maamulka hawada ku saabsani ka soo yeedho, una gudubto talaabo hormuudnimo ah –take the lead ( المبادرة زمام أخذ?